African Tourism Board inowedzera ASEAN-Africa Tourism Alliance
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board inowedzera ASEAN-Africa Tourism Alliance
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kugamuchirwa kwoushamwari kwaive pachena sezvo African Tourism Board ichiwedzera mubatanidzwa weESSE Africa yekushanya
ATB Mutungamiri Alain St. Ange kubva kuSychelles arikutungamira kubatanidzwa kwekudyidzana pakati pe Africa neASEAN bloc kuburikidza neFORSEAA.
Sezvo COVID-19 ichiri kukanganisa dzimwe nyika uye ichikanganisa hupfumi, Mutungamiriri weAfrican Tourism Board ari kushanda kuunza Africa neASEAN pamwechete.
Kuvandudza kudyidzana kwemabhizimusi madiki kunoonekwa sekiyi yekuita kuti bhora rikunguruke mukuvakazve hupfumi nekushanya.
Iyo foramu yeDiki Pakati Pakati Ehupfumi Africa ASEAN iri kuratidza zvinhu zvakasarudzwa zvakanyatsogadzirirwa kuendesa kuAfrica.
FORSEAA iri kushanda nemashiripiti emabhizimusi madiki kubva kumativi ese maviri kuti ibatsirwe mune zvehupfumi kunyanya panguva iyo mhedzisiro yeCOVID-19 coronavirus ichiri kunzwika pasi rese kunyangwe majekiseni anopfuura 1.25 bhiriyoni akaiswa pasi rose kusvika parinhasi.
Alain St. Ange, aimbova Gurukota rezveKushanya uye ava Mutungamiriri we African Tourism Bhodhi uye Executive Director veFORSEAA (foramu yeSmall Medium Economic AFRICA ASEAN), parizvino arikushanya kwekushandira kuIndonesia kubatsira FORSEAA kusimbisa kubatana pakati pe Africa ne ASEAN (Sangano reSoutheast Asia Nyika) bloc.
“Kuburikidza FORSEAA Tiri kuratidza zvinhu zvakasarudzwa zvakatemerwa kutengeswa kuAfrica muchikamu chekutanga netarisiro yekuti tinogona kudzikisa mutengo wezvinhu izvi muAfrica uye kuvhura nzira nyowani yekutengesa yevanosimudzira mabhizinesi emabhizimusi muAfrica. Maitiro aya anowirirana chaizvo nezvakataurwa neVSESEAA Vision & Mission Statement, uye zvakatikurudzira kuti tishande nemambure edu muAfrica kuti tibatsire kuona vangabatsirane kuvhura nzira iyi yekutengesa iri pakati pemablog maviri - Africa neASEAN, "akadaro St. Ange.
Munguva pfupi yapfuura, vamiririri veFORSEAA, vachitungamirwa naiye Executive Director, Alain St. Ange, vakapfuura nepakati peIndonesia vachibata maguta makuru emabhizimusi kuti vaone zvigadzirwa zvekuita runyorwa rwekutanga rweichi chibvumirano chinotungamirwa cheFORSEAA chinotungamirwa pakati pe Africa neABSE bloc. "Kushingairira pasi kwaive pachena, uye kugamuchirwa kwatakawana muguta neguta kwaingova kukuru. Tava kufambisa nhanho dzedu kuenda kukatalogu kuti bhora rikunguruke, ”akadaro St. Ange.
Alain St. Ange anga achisangana nevatengesi vezvekushanya, uye vanogadzira mahotera kuti vashande navo kuitira post-COVID-19 nzira yekugadzirira. Iri zano rinotarisa kumisikidza, kusimudzira, uye kutsiva kwazvinenge zvichidikanwa.